Kheyre: Weerarka caawa lagu qaaday Madaxweynayaashi hore waa bilowga natiijada xukun isku dhejinta -
Home News Kheyre: Weerarka caawa lagu qaaday Madaxweynayaashi hore waa bilowga natiijada xukun isku...
Kheyre: Weerarka caawa lagu qaaday Madaxweynayaashi hore waa bilowga natiijada xukun isku dhejinta
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay weerarka caawa lagu qaaday Hotelka ay degan yihiin Madaxweynayaashii hore.
Xasan Cali Kheyre ayaa ku tilmaamay tallaabadaas bilowga natiijada siyaasadda xukun isku dhejinta ah, ayna Shacabka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan xukunka keli taliska.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Xasan Cali Kheyre:-
Weerarka caawa saqdii dhexe lagu qaaday hotelka ay magaalada Muqdisho ka deganyihiin Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sh Axmed, iyo Guddoomiyihii hore ee Golaha shacabka, Shariif Xasan Sheekh Aadan, waa bilowga natiijada siyaasadda xukun isku dhajinta ah ee aan ka digeynay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Waana ibafurka farriimahii xambaarsanaa dhiilada colaadeed ee maalmihii tagay kasoo yeerayay hey’addaha dowlada ee muddo xileedkoodii dastuuriga ahaa uu dhamaaday.
Previous articleXasan Sheekh “Ciidanka dowladda ayaa soo weeraray Hotelka aniga iyo Sheekh Shariif deganahay”
Next articleDemocrats introduce Biden’s immigration plan to Congress and promise “bold” changes